पत्रकारलाई नेपाल पत्रकार मञ्चको सम्मान - Experience Best News from Nepal
पत्रकारलाई नेपाल पत्रकार मञ्चको सम्मान
काठमाडौं । २०७५ सालको प्रताप स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार चन्द्रमणि भट्टराई र सीतादेवी ढकाल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार बैकुण्ठ भण्डारीलाई प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार मञ्चद्धारा आइतबार काठमाडांैको बत्तिसपुुतलीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत साइद अल नाक्वीले उक्त पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । त्यस्तै कार्यक्रममा इजहार मिकरानी र पूर्ण महर्जनलाई अग्रज पत्रकार सम्मान प्रदान गरिएको छ ।
रु.१५ हजार राशिका प्रताप स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार योगेन्द्र प्रताप शाहीले वि.सं. २०६७ मा आफ्ना स्वर्गीय पिताको स्मृतिमा स्थापना गर्नुभएको होे । त्यस्तै रु. २० हजार राशीको सीतादेवी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार यज्ञबहादुर ढकालले स्वर्गीय आमाको स्मृतिमा गत बर्षदेखि स्थापना गरेका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत नाक्वीले लोकतन्त्रमा नागरिकका आवाज आमसञ्चारले बोल्नु सक्नुुपर्ने बताए । आमजनताको बोली सञ्चारले बोल्न थालेपछि सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने तथा समावेशी विकासमा योगदान पुग्ने धारणा राख्दै राजदूत नाक्वीले यसका लागि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ख्याल गर्नुपर्ने पनि बताए ।
नेपाली आमसञ्चार अहिले सरकारले तयार पारेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयकको पासोमा छ । कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश बिष्टले प्रस्ताव गर्न खोजिएको व्यवस्थाभन्दा अहिलेको व्यवस्था धेरै लोकतान्त्रिक र समावेशी भएको टिप्पणी गरे । यो बिधेयक स्वीकृत हुने हो भने कसैले पनि खोजमुलक समाचार लेख्न नसक्ने भन्दै प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि अन्तराष्ट्रिय मिडियाको ध्यान आकर्षित गराउने प्रयास गर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनकी निर्देशक एवं लैङ्गिक बिश्लेषक आरती चटौतले स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने वातावरणले कसैलाई नोक्सान नहुने बताईन् । कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष युवराज बिद्रोहीले पत्रकार आफू आफैंलाई प्रोत्साहित गरिहेको अबस्थालाई सरकारले अवमुल्यन गर्न नहुने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघको एसोसिएट संस्था नेपाल पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष सक्रिय पत्रकारहरुलाई कार्यसम्मानस्वरुप पुरस्कार दिँदै आएको छ । यस्ले आगामी वर्षहरुमा अझ पत्रकारलाई काममा हौसला दिन पुरस्कारको संख्या बढाउने तयारीसमेत गरेको छ । हाल यस मञ्चको क्यानडा र कोरियामा शाखासमेत रहेको छ ।